लकडाउनका नायक आर्यन सिग्देल: थानकोटमा तरकारी रोप्दै ! - Purwanchal Daily
लकडाउनका नायक आर्यन सिग्देल: थानकोटमा तरकारी रोप्दै !
८ बैशाख २०७७, सोमबार ०६:०५ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि व्यस्त कलाकारहरुको दैनिकी फेरिएको छ । कतिपय कलाकार राहत बाँड्न निस्किएका छन् भने केही कलाकार घरमै आराम गरिरहेका छन् । अध्ययन, स्क्रीप्ट लेखन देखि कृषि कर्ममा पनि कलाकारहरुको दैनिकी वितिरहेको छ ।
काठमाडौंमा बस्दै आएका नायक आर्यन सिग्देल भने श्रीमती र काखे छोरा लिएर थानकोटमा आमा बुबासँग समय विताइरहेका छन् । स्थिति सामान्य भएपछि मात्र काठमाडौं फर्किने सोच बनाएका उनी घरायसी काममा ब्यस्त भएका छन् । लकडाउनको समय उनले खेतमा काम गरेर सदुपयोग गरिरहेका छन् ।
आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राममा आमासँग खेतमा काम गर्दै गरेको तस्विर सार्वजनिक गरेका छन् । उनी कुटोले तरकारी रोप्नका लागि खेत खन्दै गरेको तस्वीर पोष्ट गरेका छन् साथै छेमा उनकी आमा पनि तस्विरमा देखिन्छिन् ।
आर्यनले खेतमा काम गर्दै गरेको तस्विरलाई उनका प्रशंसकले प्रेरणादायक भनेका छन् । उनले तस्विरसँगै क्याप्सनमा घरभित्रै बस्न पनि आफ्ना प्रशंसकलाई अपिल गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘ममीसँग काम गर्दै छु । तपाईंहरु आफूलाई मन लागेको कुरा गर्नुहोस् । तर, घरबाट ननिस्कनुहोस् ।’-इमेजखबरबाट
Previous articleपूर्व–पश्चिम राजमार्गमा हिँडेरै गन्तव्यतर्फ जानेहरुको संख्या बढ्दो
Next articleआर्थिक संकट टार्न रियल मड्रिडले ६ खेलाडी बेच्न